WARWICK UNI သည် UNIVERSITY CHALLENGE 2021 ကိုအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ ဤတွင်နောက်ဆုံးမှအကောင်းဆုံး TWEETS များရှိသည် - သတင်း
Warwick Uni သည် University Challenge 2021 ကိုအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ ဤတွင်နောက်ဆုံးမှအကောင်းဆုံး tweets များရှိသည်
အကယ်၍ သင်သည်ကျောက်တုံးအောက်တွင်နေထိုင်နေခဲ့ပါကမနေ့က Warwick တက္ကသိုလ်သည် University Challenge ကိုအနိုင်ရရှိခဲ့သည်!
သူတို့က (၁၉၅၁-၁၄၀၀) ဒီအထင်ကရပြိုင်ဆိုင်မှုမှာမက်ဒလင်းကောလိပ်ကင်းဘရစ်ကိုအနိုင်ရခဲ့တယ်။
The Warwick အသင်း Richard Pollard၊ George Braid, Owain Burrell နှင့်သူတို့၏အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကပ္ပတိန် Andrew Rout တို့ပါဝင်သည်။ ဂန္ထဝင်ဂီတမှ ၂၁ ရာစုသွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်ဇာတ်ကားများအထိ (Twilight သည်ဖော်ပြခြင်းမပြုလုပ်ခဲ့ဟုဟုန်းဟုန်းတီးလတ်) ပြင်းထန်စွာပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အားဤစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်နောက်ဆုံးနိူင်ငံ၏ပြန်လည်လည်ပတ်မှုစံနမူနာကိုပေးနိုင်သည်။ သို့မဟုတ်သင်က tweets များမှတဆင့်ပေါ်လွင်ချက်များကိုပြသနိုင်သည်။ ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်ကြိုက်နှစ်သက်သောအရာကိုကျွန်တော်သိပါသည်။
1. Burrell ရဲ့ရှပ်အင်္ကျီ
သူက SU Vintage ရောင်းအားထဲကတစ်ခုကရတယ်လျှင်အံ့? ခြင်းရှိသနည်း
သူ၏အားလပ်ရက်နှင့်ရှပ်အင်္ကျီအားဖြင့်စစ်ကြောစီရင်ခရီးသွားတားမြစ်ချက်တစ်ခု post ကိုစီးရီးရုတ်သိမ်းအပေါ် Burrell ရဲ့စိတ်ကို။ လမ်းကြောင်းအထင်ကြီးမထားဘူး #UniversityChallenge pic.twitter.com/cvNX9JynUL
- David Wilding (@ DavidWilding271) 21ပြီလ 5, 2021
Burrell သည်ယခုနှစ်တွင်သူသည်နိုင်ငံခြားခရီးစဉ်အတွက်အချည်းနှီးမျှော်လင့်ချက်ဖြင့်နေထိုင်နေပုံရသည်။ #UniversityChallenge pic.twitter.com/Yv9E9nH62B
- JJ Allerton (@AllertonJj) 21ပြီလ 5, 2021
ဘယ်အချိန်မှာ #UniversityChallenge ည ၈း၃၀ နှင့်တောင်ပစိဖိတ်အတွက်ည ၁၀ နာရီတွင်လေ့ကျင့်မှုများ pic.twitter.com/Dw7rx6ANtF
မိန်းကလေးတစ် ဦး ကိုလက်ညှိုးထိုးခြင်းသည်ဘာကိုဆိုလိုသနည်း
- ဒန်နီ (@qprrforme) 21ပြီလ 5, 2021
မည်သည့်တက္ကသိုလ်စိန်ခေါ်ချက်၏စံနှုန်းကိုမဆို Ahhhh နှင့် အကယ်၍ သင်သည် Tchaikovsky နှင့်မေးခွန်းတစ်ခုစီကိုအဖြေမပေးလျှင်၊ ဤတစ်ကြိမ်တည်းသာမှန်မည်ဟုမျှော်လင့်လျှင်သင်စနစ်တကျမကစားပါ။
၁၀ ခုအတွက် 'ငါတို့သွားနေပြီ'
တစ် ဦး ကိုယူဖို့သင်တစ် ဦး နားထောငျ
ယခု 'ဂန္ထဝင်ဂီတ' #UniversityChallenge pic.twitter.com/I6fOYMda9D
- ဆမ် (Sam_Mack1 @) 21ပြီလ 5, 2021
Rout မှတာဝန်ရှိပါကကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် ပို၍ လုံခြုံသည်ဟုခံစားရသည်။ #UniversityChallenge pic.twitter.com/tHcIYyY4nG
- မMatthewဲဟော်လန် (@matcheftheday) 21ပြီလ 5, 2021
ကျွန်တော်ဒီကိုရရှိပါသည်စဉ်းစားသူတစ် ဦး Block ၏အသွင်အပြင် #universitychallenge pic.twitter.com/Yr0cx7xY13
- Andrew Jazzie (@AndrewJazzie) 21ပြီလ 5, 2021
Beatrix Potter ၏ကမ္ဘာသည်အလွန်လေးနက်နိုင်ကြောင်းမည်သူသိသနည်း။
ဒေးဗီးစ်၏ 'A Fox နှင့် hedgehog' ကိုပြသခဲ့သည်ကိုကျွန်တော်ကြိုက်ခဲ့သည်။ သိပ္ပံပညာရှင်တစ်ယောက်လိုသိပ္ပံရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတစ်ကားမှာနောက်ဆုံးဖြေရှင်းချက်တစ်ခုပို့ပေးနေတယ်။ #UniversityChallenge pic.twitter.com/9gx1dzAFHe
- Ariadne Griffin (@Ariadne_Griffin) 21ပြီလ 5, 2021
သငျသညျကမ့်ဘဲလ် -Bannerman, Bannerman- ကမ့်ဘဲလ်ကိုခေါ်သည့်အခါထိုခံစားချက်။ #UniversityChallenge pic.twitter.com/TvZdIQtkxg
- Charles Dundas (@cdundas) 21ပြီလ 5, 2021
ဒါကအားလုံး tweet ပါပဲ။
GLUCAGON !!! 🤣🤣 #UniversityChallenge pic.twitter.com/7qUKUD6nMf
- ဒန်နီ (Feemy82 @) 21ပြီလ 5, 2021
GLUCAGON! #UniversityChallenge pic.twitter.com/axCrMLpLjB
- The Great Refuckening (@theindiereef) 21ပြီလ 5, 2021
6. Timeless Pollard
Pollard သည်အသက် ၅၀ နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်ဟုထင်သည်၊ သူအသက် ၃၀ အတွင်း Volvo ဆေးကြောထားသောသူ၏ရေတွင်းများ၌သူ၏ကားပေါ်မှထွက်လာသည်ကိုကျွန်ုပ်တွေ့မြင်နိုင်သည်။ #UniversityChallenge pic.twitter.com/DOLY7xTmDZ
- ဘာဘရာကာတာ (Springborn21 @) 21ပြီလ 5, 2021
7. # Rourrell Bromance
သူသည် Burrell ၏နာမည်ကိုမေ့လျော့ခဲ့ဖူးသော်လည်းဤနှစ်လုံးသည် ICONIC ဖြစ်သည်
ပိုပြီးအထင်ကရနှစ်လုံးကိုနာမည်ပေးပါ… Go !!! #UniversityChallengeKlaxon #UniversityChallenge #Warwick pic.twitter.com/yh02DremQF
- Alyanna Arzente (@AlyannaArzente) 21ပြီလ 5, 2021
Router & Burrell ဒီည #UniversityChallenge pic.twitter.com/SoUjgXasXL
- ရိုင်ယန် (@ryanmls_) 21ပြီလ 5, 2021
၈။ ၂၁ ရာစု Vampire ရုပ်ရှင်
University Challenge သည်လူကြိုက်များသောယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာမေးခွန်းများကိုကျွန်ုပ်တို့အတွက်လူသေများသာမေးသောအခါကျွန်ုပ်တို့ရရန်မလွယ်ကူသေးပါ။
အိုးနှင့်ငါ့တက္ကသိုလ်စိန်ခေါ်မှုရုပ်ရှင်ရုံထဲမှာ Vampire အကြောင်းကိုမေးခွန်းတစ်ခုအပေါ် The Twilight Films မှတစ် ဦး လိမ္မာကိုးကားအောင်နှိပ်စက်? im passin! pic.twitter.com/1NQS338vRw
- Minney (@horntybxtch) 21ပြီလ 5, 2021
မျှတမှုရှိသူ Pollard မှ ဦး ခေါင်းကိုတုန်ခါခြင်းသည် Vampire ရုပ်ရှင်နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွမ်းကျင်သူတစ်ယောက်မဟုတ်ပါ #UniversityChallenge pic.twitter.com/dziMl0mQDL
ဟုတ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်သူမ #Woxbridge ကိုကြားဖူးလား။
Non-Oxbridge Uni အနိုင်ရတဲ့အခါငါ #UniversityChallenge pic.twitter.com/OHgqX0BWYV
★★ ANASTAZIA ★ (@__Anastazia__) 21ပြီလ 5, 2021
ငါဂရုစိုက်တစ်ခုတည်းသော boyband #UniversityChallenge pic.twitter.com/i6zsBe13qD
- Robin Easton (@Rph_Easton) 21ပြီလ 5, 2021
Sarath Varadarajan / Warwick Quiz Soc မှဂုဏ်ပြုထားသောပုံရိပ်
•တက္ကသိုလ်စိန်ခေါ်မှုနှင့် Warwick ကိုအပြီးသတ်အောင်လုပ်ခြင်းအပေါ်နားလည်သဘောပေါက်ရန်သင်၏ cheat sheet
• Warwick တက္ကသိုလ်စိန်ခေါ်မှုနောက်ဆုံးမှတဆင့်နေသောခေါင်းစဉ်: ဒီမှာ 10 tweets အတွက်သူတို့ရဲ့ခရီးပါပဲ